Axmed Madoobe oo si guud u faahfaahiyay qaraxyadii kadhacay Kismaayo – Radio Daljir
Axmed Madoobe oo si guud u faahfaahiyay qaraxyadii kadhacay Kismaayo
Luulyo 13, 2019 11:14 b 0
Madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Jubaland Sheekh Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe) oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa fahfaahiyay qaraxyadii khasaaraha gaystay ee xalay kadhacay magaalada Kismaayo.
Axmed Madoobe ayaa sheegay qaraxa inay ku geeriyoodeen 26-qof, 56 qofna ay ku dhaawacmeen.
Isagoo ka hadlayay dadka haystay dhalashooyinka ee qarxyadan ku dhintay inay ahaayeen.
Madaxweynahu wuxuu sheegay in 26 qof ay ku geeriyoodeen weerarka halka 56 kalana ay ku dhaawacmeen isagoo sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan qaar haystay jinsiyadaha dalalka
Waxaa uu ku ammaanay ciidamada ammaanka inay soo badbaadiyeen dad badan oo ku jirau dhismaha hotelka, afar qof oo xiran aaladaha qarxa ayaa gudaha u galay dhismaha hotelka, waxaana ciidamadu ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah ragga qaraxa watay,sida uu sheegay.
Dadka ku geeriyooday qaraxa ayaa waxaa ka mid ahaa musharax Shuuriye oo horay usoo noqday xildhibaan, kana mid ahaa musharixiinta doorashada madaxtinimada ee Jubaland.
Madaxwaynaha Jubaland oo tacsi udiray dadkii eheladooda ay ka baxeen iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed ayaa sheegay inay baaritaano ku wadaan hay’adaha ammaanka dadkii qaraxa ka dambeeyey, dibna ay ka sheegi doonaan.
Somaliland oo ka hadashay markab dowladda Sacuudiga ay dib usoo celisay (daawo)
Turkiga oo soo iibsaday Ganataalo Casri ah iyo Mareykanka oo u hanjabay